Waa sidee xaalka qoyskii uu ka baxay Mucammar Qadaafi?
Qadaafi, xaaskiisa iyo carruurtisa oo ku sugan deegaanka Caziiziyah sanadkii 1992
Toban sano ka hor maanta oo kale, waxaa dalka Liibiya ka bilowday dibadbaxyo ballaaran oo markii dambe horseeday in xukunka laga tuuro hoggaamiyihii dalkaas Mucammar Qadaafi oo muddo 40 sano ah ka talinayay waddankaas. Waxaa kaalin weyn ku lahaa maamulkiisa wiilashiisa iyo qaar kamid ah qaraabadiisa, waxaana xilligaas isku diyaarinayay in talada uu la wareego wiilkiisa Saif Al Islaam.
Saddex kamid ah wiilasha Qadaafi ayaa lagu dilay dibadbaxyadii harreeyay dalkaas, waxaana kamid ahaa Muctasim Qadaafi oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee dowladda, kaas oo ay dileen dabley hubeysan isla maalintii la dilay aabihii Qadaafi.
Al Muctasim wuxuu dhashay sanadkii 1975-tii, wuxuu ahaa gaashaanle ka tirsan milateriga.
Qadaafi wuxuu ku anddacooday in gabadhii uu soo korsaday ee Hanaa lagu dilay weerarkii Mareykanka uu ku qaaday gurigiisa sanadkii 1986 xilliggaas oo ay jirtay 18 bilood oo keliya ah.